Rhv Brenda sy Rhl Thierry Setramampionona – Shine Church
Aspirant / ILC
Rhv Brenda sy Rhl Thierry Setramampionona
Leave a Comment	/ Guérison / By Patrick ANDRIANARIVO
“Shalom Bishop. Hamerina ny voninahitra hoan’Andriamanitra tompoko no antony hanoratanay mivady eto androany . Brenda et @Thierry Setramampionona , mipetraka aty Toamasina, manan-janaka 3 : 6 ans ny voaloha- 4 ans ny faharoa ary 6 mois ao ankibo , teraka @ mois d’août ny fahatelo.
Mahagaga Andriamanitra .
« Fanasitranana an’i Emma » angamba no iantsoana ny temoignage.
Tena Tia an’iJesosy izahay ary tena te hitombo @fahafantarana Azy foana.Ny fiasany @ fiainanay koa tena mampiaiky anay foana. Alleluia !
Emma dia voalaza fa trisomique ( tsy dia tiko loatra ny manonona izany , saingy izay moa no hilazana azy @ maha olombelona)
Ny trisomique dia lazain’ny olombelona hoe misy anomalie ny vatana, misy retard ny motricité , langage, intellectuel sns….
Efa bdb ny fahagagana naton’i Tompo t@Emma , KALIAN’NY AVO Emma moa no niantsoanay azy .
Exemple iray , nisy pluri malformations du coeur izy t@ vo teraka ary nasaina nanomana dossiers izahay fa hoe mila opération izy , fa rehefa nivavaka nefa dia nositranin’ny Tompo tanteraka ny fony k tsy nandalo operation izany. (Mbola tsy ampy 1an izy t@izany).
Ilay olana nisy dia tsy mbola mandeha Emma na 4 ans (latsaka 2mois ) aza, mijoro kely vetivety d mianjera .
( active tsara kosa nefa izy Satria koa ny zokiny 6 ans tena milalao b aminy ka mi stimuler azy tsara, manomboka mibadabada kely, mahay maneho tsara ny besoins any ary tsara tarehy izy raha nolazain’i Dr t@ vao teraka hoe hafahafa b ny tarehin’ireny trisomique ireny…)
T@ ity confinement ity dia manaraka fotoambavaka @FB izahay mivady dans la journée, en moyenne ilay vao maraina sy après midi .
Ny vadiko moa no tena nanomboka nandefa ilay fotoana ary tena hitako nitombo tokoa izy raha nangatsitsiaka nadritry ny fotoana maromaro ihany . Avy eo ni passe tamiko koa ilay fanatrehana nandritra ny fotoana ka lasa tsy maintsy manaraka fotoana izahay mivady miaraka isan’andro.
T@lahady hariva angamba iny raha tsy diso aho, ilay fanosorana mouchoir .
Rehefa nilaza ianao hanomboka hametraka ny mouchoir @ izay mila ny herin’Andriamanitra dia nataonay izany ary hoan’i Emma manokana dia nopetahinay t@ tongony rehetra ny mouchoir sady nivavaka sy nanonona izahay hoe mandeha @izay Emma.
Ny zandriny manko efa hoavy ka ilain’ny Emma ny indépendante kokoa , mila mandeha izy .
Harivan’io fotoana io izy Bishop dia nitsangana irery teo ampilalaovana teo ka nandeha be eraky ny efitra.
Tena faly izahay famille manontolo ary miaiky ny fiasan’ny Tompo, izy koa tena faly b raha taloha mangasihasy mijery ny tongotray mivezivezy eo alohany , izao izy efa mamindra tsikelikely eraky ny tanana.
Alleluia fa nandeha ilay zanakay.
Misaotra indrindra tompoko @ fisinareo mpanompony manaiky hoampiasainy hampitombo anay isan’andro.
Mitomboa @ fahasoavana
Raha azo atao dia mbola te hangata tsodrano aminao olompahasoavana aho hoanay 5 mianaka , indrindra hoan’ ireo zanako ireo (3 moa izany izy ireo ) Izy dahy ary ilay zanako ao ankibo.
Situation sanitaire aty toamasina tsy milamina nefa aho mois d’août normalement no teraka ao @ hôpital b, ny parents anay mivady any tana tsy afaka midina manampy @ fiterahana sy fitaizana ireo zokiny raha toa k tsy lasa coronavirus.
Izaho mahatsapa hoe reraka sy sempotsempotra ary lazain’i doc fa ambony ny taux de sucre ary asainy manao analyse diabète gestationnelle saingy mbola tsy nanao aho noho ny confinement.
nefa voie basse hatrany no tiko hiterahana tompoko ary te hody aingana aho rehefa avy teraka hamonjy ireo zanako.
Somary nisy traumatisme manko aho ilay avy niteraka an’i Emma satria tena efa ho 1 mois izahay t@ izany tany @ hôpital ary votondranomaso t@ izany .
@ ity izahay mivady dia manonona foana hoe fitahiana tanteraka hoanay mianakavy io fiterahana io fa tsy misy fahoriana sy tomany izany intsony. Matoky tanteraka an’Andriamanitra izahay ary ireo tsodrano avotsitrao mahakasika fiterahana dia tena raisinay foana.
Fa eto moa occasion hafahako miresaka mivantana ka mba mamelaha ahy hanararaotra manokana tompoko .
Dia mankasitraka hatrany Bishop.
Mitomboa @fahasoavana “
+261 34 63 688 00
Eglise Evangélique Shine
Copyright © 2021 Shine Church